I-Wolrdpay izophatha ukuphatha izinkokhelo ze-DJI online | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
I-Wolrdpay izophatha ukuphatha izinkokhelo ze-inthanethi ze-DJI
đi, kanye nenkampani I-Wolrdpay, usanda kukhipha incwadi yabezindaba ememezela ukuthi bobabili bafinyelele esivumelwaneni sokusebenzisana ukuze owokugcina aphathe ukuphatha zonke izinkokhelo ze-inthanethi ze-DJI, into, ngakolunye uhlangothi, ezosiza inkampani i-china ekhethekile emhlabeni we-drone, ingayandisa ipulatifomu ye-e-commerce futhi ifinyelele kumakhasimende amaningi emhlabeni wonke.
Umbono abanawo ku-DJI awukho omunye ngaphandle kokusebenzisa amakhono anikezwa yiWolrdpay njengomlingani wezobuchwepheshe ngenxa yayo irekhodi lomkhondo elidumile futhi ngaphezu kwakho konke kuzinzuzo zokutholwa kwekhadi lakho lendawo njengendlela yokukhokha engakunikeza. Ngenxa yalokhu kusebenzisana I-DJI izokwazi ukuxhumana namakhasimende avela ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba ngokwenza imikhiqizo yakho ibonakale ifinyeleleka kakhulu kuzo zonke izinhlobo zamaphrofayli ochwepheshe.
U-DJI no-Wolrdpay abalingani ukuletha inkokhelo ye-elektroniki endaweni yesikhulumi se-DJI
Njengoba kuphawuliwe UChristina Zhang, umgcinimafa we-DJI wamanje:
Imakethe yedrone yomhlaba iqhume eminyakeni yamuva; amaklayenti athola izindlela zokusebenzisa ubuchwepheshe nokuletha imibono emisha empilweni yabo yansuku zonke. Lesi yisikhathi esijabulisa kakhulu kulo mkhakha. Njengoba ubuchwepheshe bethu buba lula ukubusebenzisa, ngenxa yokwanda kwezicelo kulo mkhakha, sifuna ukuthi ama-drones ethu atholakale kalula kubantu emhlabeni jikelele, emsebenzini nasekudlaleni. Esikhathini esizayo esiseduze, sinethemba lokufinyelela kumakhasimende amasha amaningi eYurophu kanye nase-Asia-Pacific esifundeni, futhi sakhe isipiliyoni esingenamthungo futhi esivikelekile kumakhasimende ethu aku-inthanethi ngokuxhaswa yisixazululo sokukhokha seWorldpay.
Ngakolunye uhlangothi, UShane Happach, Isekela Likamongameli Ophethe kanye neNhloko yeGlobal Enterprise eCommerce kwaWorldpay, Inc., usho lokhu okulandelayo:
Ukulwa nabakwa-scammers online kungenye yezinto ezikhathaza kakhulu abakhiqizi be-elekthronikhi, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngobuchwepheshe obunqenqemeni njenge-drones. Inselelo yamabhizinisi akhulayo kulinganisa ukuthengiswa kwevolumu ephezulu nekhono lokuqinisekisa abathengi ngezinsizakalo eziphephile nezithembekile. IWorldpay isize izinkulungwane zezinkampani emhlabeni wonke ukufezekisa leli bhalansi; Ngakho-ke, izithuthukisi ze-DJI kuze kube manje zibonisa ukuthi indlela ebaluleke kakhulu yokuqola inkohliso iyimpumelelo yokwanda kwenhlangano.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » drones » I-Wolrdpay izophatha ukuphatha izinkokhelo ze-inthanethi ze-DJI